International Movie Archives - Page7of7- YTV
Home » Programs » International Movie » Page 7
? စက်ရုပ်တွေမှာသာ လူသားတစ်ယောက်လို ခံစားချက်တွေရှိနေရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ…? ?‍❤️‍?‍? ဒီနေ့မှာတော့ သည်းထိပ်ရင်ဖိုဖြစ်စေမယ့် သိပ္ပံရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ပရိသတ်တွေအတွက် ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ…ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ လူငယ်စုံတွဲဟာ အကူအညီရဖို့အတွက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီး လူအစစ်တစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ စက်ရုပ်ကို ရယူခဲ့ပါတယ်…….…. ? […]
September 7, 2020 12:20 am
? စူပါဟီးရိုးတွေဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မရှိမဖြစ်အမြဲလိုအပ်နေမယ့်သူတွေများ ဖြစ်နေမလား…??? ? စူပါဟီးရိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အစွမ်းတွေအပေါ် လူတွေ ယုံကြည်မှုနည်းလာတာကြောင့် သာမန်ဘဝတွေလိုနေခဲ့ရာကနေ တစ်နေ့မှာတော့ စူပါဟီးရိုးတွေကို သဘောကျတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက စူပါဟီးရိုးတွေကို လူထုရဲ့အားပေးမှုပြန်ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်………… ? […]
? အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုမှ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ လက်ဖြောင့်တပ်သားတစ်ဦးရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးပါ ? အာဖရိက ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် တွဲဖက်လဲဖြစ်သူကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေကို စိတ်နာလို့ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတော့တယ်… […]
? ငယ်ရွယ်သူတွေကြား ချစ်သူနှစ်ယောက်ထားတာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ထင်နေတုန်းဆိုရင်တော့ ဒီအချစ် ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်…… ? ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ကတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ရဲ့ ရိုဆန်ဆန် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးမှာ ချစ်သူရှိရက်နဲ့ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အခါ လူငယ်ပီပီ […]
?‍? ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ ယှဉ်နှိုင်းလို့မရပါဘူးတဲ့……… ? ဒီစကားကို သက်သေပြထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းနဲ့ ဆက်သွယ်မိတဲ့ သမီးလေးကို အမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ ကာကွယ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတဲ့ အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားကြီး “Blood Father” ကို YTV […]
September 5, 2020 12:10 am
? ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အချစ်တော်စွန်းဝူခုန်း ဖြစ်မလာခင်မှာ ဘယ်လိုရာဇဝင်တွေရှိလဲဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဟာသဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်…. ? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Fairy Zixia ဆိုသူဟာ နောင်မျိုးဆက်မှာ Monkey King ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အများသိကြတဲ့ စွန်းဝူခုန်းလို့ […]